कसरी हाम्रो एप्पल समाचार मा स्पेनिश मिडिया जोड्ने आईफोन समाचार
कसरी हाम्रो एप्पल समाचारमा स्पेनिश मिडिया थप्ने
तपाईहरु मध्ये धेरै जसोलाई थाहा छ, आईओएस official को आधिकारिक आगमनको लागि एक महिना भन्दा बढी बाँकी छ र एक नयाँ उपन्यास ल्याउने छ जुन यसले ल्याउँदछ जुन हामी समाचारहरू पढ्न सक्दछौं। एप्पल न्यूजको मिडिया खोजी प्रणाली छ, तर व्यावहारिक रूपमा ती सबै अ English्ग्रेजीमा छन्, जसले प्रायः आईफोन समाचार पाठकहरूको सेवा गर्दैन। त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू यस तथ्यको बारेमा चिन्तित छन् कि सामग्री हाम्रो भाषामा उपलब्ध छैन, तर एप्पल न्यूजको एक उत्तम कार्यहरू यो हो कि यसले हामीलाई व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि ब्लग र समाचार पोर्टल थप्न अनुमति दिनेछ सफारी बाट
यो अझै थाहा छैन कि एप्पल न्यूज संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक अन्य देशहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ जुन एकै समयमा आईओएस released जारी गरिएको छ, त्यसैले तपाईंले अनुप्रयोग पहुँच गर्न सक्षम हुन केही चाल गर्नु पर्छ र यसैले हाम्रो मनपर्ने मिडिया यसलाई बचत गर्न सक्षम हुनुहोस्। यो एक सरल प्रक्रिया हो र यसले प्रणालीमा व्यावहारिक रूपमा केहि पनि परिवर्तन गर्दैन। मैले यो पहिलो आईओएस आईओएस since बाट गरें र मैले केहि पनि याद गरेन।
1 संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर एप्पल समाचार कसरी पहुँच गर्ने
2 एप्पल समाचारमा स्पेनिश मिडिया कसरी थप्ने
संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर एप्पल समाचार कसरी पहुँच गर्ने
एप्पल समाचार यस समय अमेरिका बाहिर उपलब्ध नभएकोले हामीले हाम्रो क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यो गर्न, हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
हामी सेटिंग्स / सामान्य / भाषा र क्षेत्र / प्रादेशिक ढाँचा / क्षेत्र र हामी संयुक्त राज्य को छनौट गर्दछौं.
हामी पछाडि जान्छौं र मिति र समयमा हामी २ hour घण्टाको घडी सक्रिय गर्दछौं यदि हामी चाहन्छौं भने (समय ढाँचा परिवर्तन जब हामी अमेरिकामा क्षेत्र परिवर्तन गर्दछौं)।
यदि हामीले स्प्रिboardबोर्डमा अनुप्रयोग देख्दैनौं भने, हामी बन्द र फेरि आईफोन / आईपड वा आईप्याड मा।
एप्पल समाचारमा स्पेनिश मिडिया कसरी थप्ने
हामी वेब पहुँच गर्दछौं हामी एप्पल समाचारमा थप्न चाहान्छौं।
हामी मा खेले सेयर (
हामी यसको आइकन खोज्छौं समाचार अनुप्रयोग र हामी यसमा खेल्दछौं। यदि यो थपिएको छैन भने, हामी पहिले वेबको डेस्कटप संस्करण राख्न प्रयास गर्दछौं (मेरो मामलामा, यो समाचारमा थप्नको लागि अर्को छेउमा छ)।
अब हामी एप्पल समाचार खोल्छौं र मध्यम जोडीएको प्रमाणित गर्दछौं।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हामीले थपेका धेरैजसो मिडियामा कुनै छवि हुँदैन, कम्तिमा यो सबै मिडियासँग पूर्ण रूपमा उपयुक्त हुँदैन वा हामी एप्पललाई हामीलाई एप्पल समाचारमा समावेश गर्न अनुरोध पठाउँदैनौं। जे भए पनि, मैले सबै टेक्नोलोजी मेडियाहरू थपेको छु जुन मेरो रुचि हो, एक बाहेक। तपाईले त्यो माध्यम थप्न सक्नु अघि यो केवल कुराको कुरा हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी हाम्रो एप्पल समाचारमा स्पेनिश मिडिया थप्ने
पाब्लो, यदि हामी त्यो गर्छौं, यो अमेरिकाको लागि कसरी कन्फिगर गरिएको छ, App Store र बाँकी अमेरिकामा जडान हुनेछ? वा यसको यससँग केहि गर्न केहि छैन ...?
अभिवादन र राम्रो लेख, मलाई कुनै विचार थिएन
नमस्कार राफेल। यसले केहि परिवर्तन गर्दैन वा तपाईले केहि देख्नुहुने छैन। अनुप्रयोग स्टोर, आइट्यून्स, आईक्लाउड र सबै ती चीजहरू जुन तपाईंको एप्पल आईडीको साथ कन्फिगर गरिएको छ र जहाँ तपाईं यो बनाउनु भएको छ निर्भर गर्दछ, यस मामलामा स्पेनमा। मलाई लाग्छ कि जोनले पनि स्पेनीको साथ तपाईको लागि अ config्ग्रेजी कन्फिगर गर्दछ र कुञ्जीपाटी थपेको छ, तर अब म पक्का छैन कि (यदि तपाईले यसलाई प्रयास गर्नुभयो भने तपाईले यसलाई यकिन गर्नुभयो। भाषा तपाई आफैं-सुधारकर्तामा देखा पर्नेछ जब तपाईले विश्वलाई छोड्नुहुन्छ। बल, सँगै स्पेनिश र ईमोजीमा। अ the्ग्रेजी किबोर्ड हटाउनुहोस्)। यो आईफोन सुरु गर्ने बखत चाँडो सेट अप गर्ने तरीकाको जस्तो छ, तर त्यसपछि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले केही पनि याद गर्नुभएन।
धन्यबाद पाब्लो, मैले यो प्रयास गरेको छु र मैले कुनै परिवर्तन देखेको छैन, एप स्टोरले मेरो आईडीसँग जोडेको छ, मसँग यो खबर छ तर मैले चाहेको कुराको साथ, यो एकदम राम्रो छ!
धेरै धेरै धन्यबाद, बधाई छ!
NEWS आइकन यी चरणहरू निम्न अनुसार देखा पर्दैन (ios9 भर्खरको बिटा स्थापना भएको)
नमस्कार, एन्रिक। पुनः सुरु गर्न बल गर्नुहोस् (सुरु गर्नुहोस् + आराम गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं एप्पललाई देख्नुहुन्न)।
जोनी पलाजुएलोस भन्यो
मैले जे पनि गरेको छु, एप्पल समाचार अनुप्रयोग पाउँदछु, समस्या यो छ कि जब म सफारीबाट एप्पल समाचारमा पृष्ठ थप्न चाहान्छु, म कुनै विचारहरू पाउँदिन?
जोनी पालाजुएलोसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते जोनी। त्यहाँ केहि वेबसाइटहरू छन् जुन असफल हुन्छन्। तपाई वेबको नाम खोज्न को लागी आरएसएस वा फीड पछिको प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाँही आइकनमा छुने हो जुन नारंगी रंगको रूपमा वाइफाइ सिग्नल (आरएसएस) सीधा थपिन्छ।
के थप्न को लागी इंटर्नर्स?
मारियो बोकाक्सीओ भन्यो
नमस्ते, पाब्लो। मसँग मेरो आईप्याड २ छ iOS2 को बीटा संस्करणको साथ, तर यसमा समाचार अनुप्रयोगहरू छैनन्। आईप्याड २ मा समाचारले काम गर्दैन? अग्रिम धन्यवाद र पनामाबाट बधाई छ।
मारियो बोकाकाइयोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारियो तिनीहरूले आईप्याड २ सँग मिल्दो नभएको बारेमा केहि भनेका छैनन्। के तपाईले संयुक्त राज्य अमेरिकामा क्षेत्र सेट गर्नुभयो र रीबुट गर्न बाध्य गर्नुभयो?
यो काम गर्नको लागि, तपाइँले पहिले डेस्कटप संस्करण देख्न आवश्यक छ।
नमस्ते सर्जियो। राम्रो नोट जुन मैले पास गरेको छु (मैले यसलाई सधैं डेस्कटप मोडमा राख्छु - यदि यो एक्लो हुँदैन भने)। म यसलाई थप्छु।
नमस्कार, मैले एक्टुलिडाडीफोन पहिले नै थपेको छु तर मलाई देखिने समाचार २ हप्ता पहिलेको हो, कसरी त्रुटि समाधान गर्ने? यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई मद्दत गर्न स्क्रिनशट पठाउँछु।
नमस्कार, अगस्टो। भवदीय मलाई थाहा छैन। केहि ब्लगहरूमा म उही समस्या हुँ। आईकक्लोडको साथ समाचार सिncing्क असक्षम पार्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि तपाईं यसलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर।
अझै पनि उस्तै। वर्तमान समाचार देखा पर्दैन
नमस्कार फेरि, अगस्टो। यो मेरो लागि बाहिर काम गर्दछ, तर अरूले मलाई असफल गर्छन्। हुनसक्छ उनीहरूले अनुप्रयोगमा केहि समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ।
धन्यबाद। म यो बीटा पछि सबै स्थिर हुन बगको लागि कुर्नेछु। हाहाहा पहिले नै नयाँ आईओएस9र ओएस एक्स एल क्यापिटानको प्रतीक्षामा छन्। आशा छ कि म आईओएस W वेभ वालपेपरको लागि पर्खिरहेको छु कि सुन्दर थियो तर तिनीहरूले यसलाई हटाए।
एप्पल वाचको लागि मिलानीस लूपको समीक्षा
माइक्रोसफ्टले app० भाषाहरूमा अनुवाद अनुप्रयोग सुरू गर्दछ